Google dia manolotra ny Pixel 3 sy Pixel 3XL hihinana izao tontolo izao sy maro hafa | Androidsis
Habemus Google Pixel 3 sy 3XL: ny lehibe G dia mandeha amin'ny zavatra rehetra miaraka amin'ny Assistant sy ny sary
Manuel Ramirez | | Finday
zara raha efa naheno isika momba ny fandefasana sy ny Google Pixel 3 vaovao. Nandritra ny herinandro maro, dia saika hiteny amam-bolana isika, tsy nijanona ny fivoahana mba hampiakarana amin'ny ambaratonga avo indrindra fantatsika hoe hype. Na izany na tsy izany, niandry ny Google hanana fahagagana farany teo amin'ny satrony izahay ary gaga anay rehetra.
Google Pixel 3 sy 3 XL sasany tonga toy izany afaka mahazo telefaona Google vaovao indray ny mpankafy anao Eo am-pelatananao. Fa ambonin'izay rehetra mitondra ny tanjona lehibe ananan'ny tànany G lehibe: fitaovana manolotra traikefa mifototra amin'ny AI + Software + Hardware. Noho izany, Google Assistant dia iray amin'ireo bastions hitondra antsika traikefa izay hardware dia ampahany iray hafa amin'io trio io.
1 Google indray no manao azy
2 Ny tsara indrindra: rindrambaiko AI + rindrambaiko
3 Famaritana ara-teknika an'ny Google Pixel 3 sy 3 XL
4 Amin'ny maso sy amin'ny efijery miresaka momba ny Google Pixel 3 sy 3 XL
5 Sombiny sasany sy ny vidiny
Google indray no manao azy
Ny lehibe G dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika ary miatrika ny iray amin'ireo orinasa teknolojia nivoatra indrindra tato ho ato izahay. Betsaka ny filokana mba ahazoana manana findainao manokana izay Izy ireo dia miady mifanatrika amin'ireo Samsung sy Apple; Iza no hiteny amin'izao fotoana izao rehefa nitsikera be loatra fa ny Google Pixel voalohany dia nanana vidiny lafo tokoa.
Fa misaotra an'i sary tena tsara, izay herintaona ho avy raha oharina amin'ny premiums an'ny marika hafa, ary fampisehoana miavaka rehefa manana Android amin'ny endriny madio indrindra, dia nahazo an'i Google ho afaka hirehareha amin'ny marika Pixel izay manohy manolo-tena mafy tokoa. Azo antoka fa rehefa mametraka rakitra somary masiaka izy ireo dia ho finday lehibe kokoa noho ireo ananantsika ankehitriny.
Ny tsara indrindra: rindrambaiko AI + rindrambaiko
Ankoatra ny fananana Android Pie 9.0 efa misy ao amin'ny orinasa, ireto Pixel roa vaovao ireto manana sary mahafinaritra indray izy ireo. Azon'izy ireo atao mihitsy aza ny miala amin'ny fikirakirana roa ao amin'ilay lehibe hampiasana sensor 12.2 MP, raha eo amin'ny fakan-tsary eo aloha kosa dia mijanona amin'ny 8MP miaraka amina lantira roa manao ny zavatra ho an'ny sarin'ny vondrona; manantena ny fomba fijerin'ny sary miaraka amin'ny maody fakana sary tsara ny Pixel izahay.
Na dia ny zava-dehibe dia izao: ny fakantsary Google dia haka ny zava-dehibe indrindra amin'ny Google anio: Rindrambaiko AI + rindrambaiko. Ny fampiharana fakan-tsary dia ohatra mazava an'io mba ho dingana ambonin'ny sisa amin'ny fifaninanana.
Mba hanasongadinana ny Sight Night na izany aza tsy mila maka sary tsy misy flash. Izany hoe hikarakara sary an-tsaina ny rindrambaiko solosaina tsotra fotsiny. Demo etsy ambany miaraka amin'ireo sary.
Famaritana ara-teknika an'ny Google Pixel 3 sy 3 XL
modely Pixel 3 Pixel 3 XL
efijery 5.5 santimetatra - Full HD + AMOLED 18: 9 6.3 "QHD + (2960 x 1440) P-OLED 18.5: 9
Tahiry anatiny 64GB / 128GB 64GB / 128GB
Efitra lehibe 12.2 MP - f / 1.8 - 1.4um - OIS - Pixel Core - 4K / 30FPS 12.2 MP - f / 1.8 - 1.4um - OIS - Pixel Core - 4K / 30FPS
Fakan-tsary mialoha 8 + 8MP - f / 2.2 - 1.4um - horonantsary 1080p 8 + 8MP - f / 2.2 - 1.4um - horonantsary 1080p
bateria 2.915 mAh miaraka amin'ny famahana finday 3.430 miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby
lafiny 145.6 X 68.2 X 7.9mm 158 X 76.6 X 7.9mm
Fomba hafa NFC - Mpamaky sidina aoriana - Bluetooth 5.0 - GPS - USB karazana C - IP67 NFC - Mpamaky sidina aoriana - Bluetooth 5.0 - GPS - USB karazana C - IP67
Amin'ny maso sy amin'ny efijery miresaka momba ny Google Pixel 3 sy 3 XL
Del Pixel 3 XL dia manasongadina ny efijery 6,5 ″ P-OLED izahay, raha ny Pixel mahazatra kosa dia mijanona ao anaty tontonana karazana OLED. Telefaona roa misongadina ho tsara indrindra amin'ny kalitaon'ny efijery, raha ao anatiny kosa dia misy ny puce Snapdragon 845 avy amin'ny Qualcomm miaraka 4GB RAM (tena tsy ilaina intsony) ary fahatsiarovana anatiny mihoatra ny 64 ka hatramin'ny 128GB miankina amin'ny maodely voafantina .
Google amin'ity taona ity dia nametraka notch lehibe hampisongadina ny tenanao. Tena manaitra ny habaka rehetra sisa tavela amin'izay heverina fa fampandrenesana sy ireo andiana singa. Saingy lehibe loatra izany ka tsy dia miharihary loatra. Heverinay fa hanana ny anton'izy ireo izy ireo raha nanao an'io habe io amin'ny halehibe toa izany; Tsy te hieritreritra ny habaka rehetra hohanina akory isika Lalao karazana PUBG Mobile o Fortnite.
Sombiny sasany sy ny vidiny
Ary eny manohy izahay tsy misy audiojack (Mandrakizay dia toa miaraka amin'ity marika ity) sy ireo headphone ho an'ny karazana USB-C. Tokony holazaina fa ny fonosana dia misy, ankoatry ny headphones, USB-C ka 3.5mm dongle, USB type-C mankany amin'ny cable C-type hafa ary USB type-C hafa mankany USB type-A dongle. Izany dia vokatry ny fahasahiranana mankany amin'ny USB Type-C sy ny fandehanana amin'ilay audiojack… Ny telegrama na aiza na aiza
Pixel Stand dia iray amin'ireo zava-baovao miaraka aminy fenoy ny telefaoninao ary fehezo amin'ny feonao izany como el raha foiben'ny tranokala google io. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manana ny Pixel 3 eo amin'ny latabatra fandriana sy mifandray aminy amin'ny fomba tsotra.
Google Pixel 3 dia efa misy famandrihana ho an'ny vidiny 849 euro ho an'ny kinova 64GB, raha ny kinova 128GB dia tafakatra 949 euro. Ny Pixel 3XL lelga hatramin'ny 949 euro amin'ny kinova 64GB miaraka amin'ny 128GB izay tafakatra 1.049 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Habemus Google Pixel 3 sy 3XL: ny lehibe G dia mandeha amin'ny zavatra rehetra miaraka amin'ny Assistant sy ny sary
Ny Google Pixel Slate dia ofisialy izao: lazainay anao ny zavatra rehetra!
Google Home Hub, na Google Assistant ao an-tranonao tafiditra ao anaty takelaka